Vanhu Vakawanda Vanoti Vanoda Ruzivo Pamusoro peNhomba yeCovid-19
Sample Kits at Wilkins Hospital
Vagari vemuHarare vakawanda vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti kwave nenhomba yokudzivirira chirwere cheCovid 19, vazhinji vavo vanoti havasi kunyatsonzwisisa nezvemushonga uyu.
Mumwe mugari wemuguta, VaAlbert Mwaengepi, vanoti kunynage hazvo gurukota rezvehutano, VaConstantino Chiwenga, vakapaiwa chibaiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona, kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Mutori wenhau, Henry Munjanja,anotiwo haasi kuzobaiwa nhomba iyi nechikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Asi nhengo yesangano reThe Aids and Arts Fondation, VaEmmaunel Gasa, vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid 19 yave munyika.
Asi VaGasa vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzehutano dzemunyika isati yabaiwa veruzhinji.
Mumwe mugari wekuArdbernie, Amai Nakisai Murenje, vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobaiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kweCovid 19, asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu.
Asi mumwe mukuru mubazi rezvehutano, Dr Robert Mudyiradima, vanoti pane hurongwa hwekushambadzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika.
Zimbabwe yakagamuchira neMuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapihwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCovid-19.
Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukambani yekuChina ye Sinopharm.
Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCovid-19.